Ukuqhuba ucwaningo noma umhlangano, igumbi lomhlangano liyadingeka. Ukushada noma ukushada, ihhovisi lokubhalisa liyadingeka, futhi ukugubha umkhosi, kunesidingo sendawo. Futhi wonke la makamelo azokunikeza idolobha elihle laseKrasnodar.
I-Ekaterinensky Hall (i-Krasnodar): ibambe izingqungquthela kanye nezingxoxo
Izinkampani ezinkulu noma izombusazwe zivame ukuphoqeleka ukuba ziqhube izingxoxo kanye nemihlangano. Futhi ngezinto ezinjalo zidinga amakamelo akhululekile ukukhuluma nokuhlangana. Ezimweni ezinjalo, i-Catherine Hall iyilungele kahle. I-Krasnodar idolobha elikhulu, kodwa kunzima ukuthola indawo enhle yokuqhuba imihlangano yebhizinisi lapho.
Ihholo likhulu ngokwanele futhi lihlala abantu abangaphezu kwamakhulu amathathu. "Catherine Hall" kubhekwa njengenye yezinto ezinhle kakhulu. Ngaphakathi kusetshenziswe kahle umoya we-air conditioning system, ngakho-ke umoya kuwo uhlale upholile futhi uhlanzekile. Kulokhu, izivakashi zizohlala zikhululekile kuyo.
"Catherine Hall" (Krasnodar) izohlinzeka wonke umuntu ngamatafula angamashumi amathathu azungezile nezihlalo eziyishumi ngamunye wabo. Lokhu kuzohlinzeka induduzo enkulu kunoma imiphi imihlangano yebhizinisi.
Futhi, i-Ekaterina Hall (i-Krasnodar, 47, i-Officerskaya Street) ingahlinzekwa ngokukhululekile kwezinye izenzakalo, imikhosi, amaqembu okuzalwa, imishado, amaqembu okuphothula iziqu kanye namadili.
Isigodlo Semishado eKrasnodar
Ukuqhuba ukubhaliswa komshado, uzodinga ihhovisi lokubhalisa "Catherine Hall." I-Krasnodar idumile iminyaka eminingana ngenxa yesigodlo sayo somshado. Le ofisi yokubhalisa nayo ingenye yezindawo ezinkulu zokubhalisa eningizimu yeRussia. Yigumbi elihle futhi elihlotshisiwe, nokudlala umculo omnandi owenziwe ngabaculi.
Amagama okubingelela afundwa ngabasikati abasha abanenkulumo ekhulunywe kahle. Ngamagama, zonke izimenywa eziza, ikakhulukazi umakoti nomkhwenyana, zihlale zanelisekile. Ngesikhathi ulinde ukuqala komkhosi nokubhaliswa, umculo omuhle nomculo uzwakala. Idesksi lokubhalisa lisendaweni encane ephakanyisiwe yezinyathelo eziningana. Ngakho-ke, zonke izivakashi ezikhona manje zizokwazi ukucabangela umakoti nomkhwenyana, futhi akekho kubo ozodinga ukucinga indawo elula ehholo.
"Catherine Hall" (Krasnodar): ihholo elincane
Ihholo elincane linikezela ikamelo elincane elikhanyayo nelinethezekile, elinamakamelo amaningana ahlukene. Umakoti nomkhwenyana bazohlukaniswa nezivakashi. Lokhu kunikezwa ukuze unike amandla abashadayo ukuba babe bodwa nomunye futhi bajabulele ubumfihlo ngaphambi komkhosi.
Uma lomshado ugubha ebusika, izakhamuzi zizohlinzekwa ngezingubo zokugqoka lapho ungashintsha khona izingubo futhi ubeke izinto zakho. Eduze ihholo, emgwaqweni, kukhona umthombo omuhle oseduze nawo ongenza izithombe ezihlangene. Ngesicelo sezivakashi, ithuba lokuhamba phakathi kwe- Chistyakivsky grove linikezwa , ngoba kukhona i-Wedding Alley nezinye izindawo zomshado ezithandwa kakhulu. Khumbula ukuthi kufanele ufake isicelo sokubhalisa umshado umuntu kanye nezinyanga ezimbili ngaphambi kwesikhathi lapho unqume ukwenza umshado. Kumyeni nomfazi wesikhathi esizayo, izisebenzi zizosiza ezindabeni zomhlangano eziphathelene nesikhathi somcimbi kanye nokukhethwa kwezakhiwo ezifanele ezinikezwe i-Ekaterina Hall. I-Krasnodar yumuzi omkhulu futhi othuthukayo, ngakho-ke iziphathimandla zedolobha zenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi induduzo yabakhamuzi bayo.